How can you know your baby has an eye problem? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သငျ့ကလေးမှာ အမွငျအာရုံခြှတျယှငျးမှူရှိမရှိ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ
သငျ့ကလေးရဲ့ အမွငျအာရုံရငျ့သနျပွီး ကမ်ဘာကွီးကို သခြောကွညျ့တတျဖို့ အခြိနျတဈခုလိုပါတယျ..။ ဒါကွောငျ့မို့ ကလေးငယျရဲ့ ဘဝစစခငျြးမှေးကငျးစအခြိနျတှမှော သငျမြှျောလငျ့ထားသလောကျကွီး အမွငျအာရုံကောငျးဖို့တော့ ဖွဈနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး..။
ဥပမာ…. ကလေးအသကျ ပထမသုံးလအထိလောကျမှာ သငျ့ကလေးကိုခြီထားခြိနျမှာ သငျ့ကလေးရဲ့မကျြလုံးအကွညျ့တှေ သငျ့မကျြနှာဆီကို မကွာခဏရောကျနမှောမဟုတျပါဘူး…။ ဒါက ပုံမှနျအခွအေနပေါပဲ..။
ဒါပမေယျ့ အောကျမှာဖျောပွပေးသှားမယျ့အခကျြတှကေတော့ သငျ့ကလေးမှာ အမွငျအာရုံနဲ့ပတျသကျတဲ့ ပွနာရှိနနေိုငျတယျဆိုတာကို ပွသနိုငျတဲ့ အခကျြတှပေဲဖွဈပါတယျ..။
မကျြလုံးတဈဖကျပဲ လှူပျရှားပွီး တဈဖကျမလှူပျရှားခွငျး
အသကျတဈလကြျောသညျ့တိုငျအောငျ အလငျးရောငျ….. လကျကိုငျဖုနျး… နဲ့ တခွားစိတျဝငျစားစရာ လိုးလိုးလကျလကျပစ်စညျးမြားကို စိတျဝငျစားမှူမရှိခွငျး
ကလေးရဲ့ မကျြလုံးတဈဖကျက ဘယျတော့မှမပှငျ့ခွငျး
ကလေးမကျြလုံးအတှငျးမှာ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ အဖွူစကျရှိနခွေငျး
မကျြလုံးတဈဖကျ ဒါမှမဟုတျ နှဈဖကျစလုံးဖောငျးနခွေငျး
မကျြခှံတဈဖကျ ဒါမှမဟုတျ နှဈဖကျစလုံး အောကျကနြခွေငျး
ကလေးငယျ အိပျမပြျောဘဲ နိုးနတေဲ့ အခြိနျတှမှော မကျြလုံးကို မကွာခဏပှတျနခွေငျး
သားငယျအိမျ တဈဖကျနှငျ့ တဈဖကျ အကွီးအသေးမညီခွငျး
ဒါတှအေပွငျ အသကျသုံးလ အရှယျလောကျဆိုရငျတော့ ဒီလို အခကျြတှရှေိရငျ အမွငျအာရုံခြှတျယှငျးမှူရှိနနေိုငျပါတယျ..။
မကျြစိရှမှေ့ာ လှူပျယမျးနတေဲ့ အရုပျနောကျကို လိုကျမကွညျ့ခွငျး
တဈစုံတဈခုကို ကွညျ့တဲ့အခါ ခေါငျးစောငျးပွီးမှ ကွညျ့ခွငျး
အထကျပါအခကျြတှေ သငျ့ကလေးမှာရှိနပွေီထငျရငျတော့ နီးစပျရာ မကျြစိဆရာဝနျနဲ့ပွသပွီး အကွံဉာဏျတောငျးခံသငျ့ပါတယျ…။ ဆရာဝနျက လိုအပျသလို စမျးသပျစဈဆေးပေးပါလိမျ့မယျ….။
သင့်ကလေးမှာ အမြင်အာရုံချွတ်ယွင်းမှူရှိမရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
သင့်ကလေးရဲ့ အမြင်အာရုံရင့်သန်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို သေချာကြည့်တတ်ဖို့ အချိန်တစ်ခုလိုပါတယ်..။ ဒါကြောင့်မို့ ကလေးငယ်ရဲ့ ဘ၀စစချင်းမွေးကင်းစအချိန်တွေမှာ သင်မျှော်လင့်ထားသလောက်ကြီး အမြင်အာရုံကောင်းဖို့တော့ ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး..။
ဥပမာ…. ကလေးအသက် ပထမသုံးလအထိလောက်မှာ သင့်ကလေးကိုချီထားချိန်မှာ သင့်ကလေးရဲ့မျက်လုံးအကြည့်တွေ သင့်မျက်နှာဆီကို မကြာခဏရောက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး…။ ဒါက ပုံမှန်အခြေအနေပါပဲ..။
ဒါပေမယ့် အောက်မှာဖော်ပြပေးသွားမယ့်အချက်တွေကတော့ သင့်ကလေးမှာ အမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြနာရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြသနိုင်တဲ့ အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်..။
မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲ လှူပ်ရှားပြီး တစ်ဖက်မလှူပ်ရှားခြင်း
အသက်တစ်လကျော်သည့်တိုင်အောင် အလင်းရောင်….. လက်ကိုင်ဖုန်း… နဲ့ တခြားစိတ်ဝင်စားစရာ လိုးလိုးလက်လက်ပစ္စည်းများကို စိတ်ဝင်စားမှူမရှိခြင်း
ကလေးရဲ့ မျက်လုံးတစ်ဖက်က ဘယ်တော့မှမပွင့်ခြင်း
ကလေးမျက်လုံးအတွင်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အဖြူစက်ရှိနေခြင်း
မျက်လုံးတစ်ဖက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဖက်စလုံးဖောင်းနေခြင်း
မျက်ခွံတစ်ဖက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဖက်စလုံး အောက်ကျနေခြင်း
ကလေးငယ် အိပ်မပျော်ဘဲ နိုးနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ မျက်လုံးကို မကြာခဏပွတ်နေခြင်း
သားငယ်အိမ် တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အကြီးအသေးမညီခြင်း
ဒါတွေအပြင် အသက်သုံးလ အရွယ်လောက်ဆိုရင်တော့ ဒီလို အချက်တွေရှိရင် အမြင်အာရုံချွတ်ယွင်းမှူရှိနေနိုင်ပါတယ်..။
မျက်စိရှေ့မှာ လှူပ်ယမ်းနေတဲ့ အရုပ်နောက်ကို လိုက်မကြည့်ခြင်း
တစ်စုံတစ်ခုကို ကြည့်တဲ့အခါ ခေါင်းစောင်းပြီးမှ ကြည့်ခြင်း
အထက်ပါအချက်တွေ သင့်ကလေးမှာရှိနေပြီထင်ရင်တော့ နီးစပ်ရာ မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းခံသင့်ပါတယ်…။ ဆ၇ာဝန်က လိုအပ်သလို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်….။